J: March 2009
Technology - sliding house
Ross Russell (၄၈နစ်) ဟုဆိုသူ ၏ အိမ် Suffolk home သည် East Anglian barn ခြံမြေတွင် ဆောက်လုပ်ထားပါသည်။ သူ့ အိမ်ကို စတီး မှန်များ ဖြင့် တည်ဆောက်ထားပြီး အပေါ်ယံ သစ်သား အခွံ ကို ရွှေ့ပြောင်း ပြီး အိမ်အပေါ်ယံ ထပ် အုပ်နိုင်ရန် ကားဘက်ထရီ လျှပ်စစ်ဓါတ်အားဖြင့် ဖန်တီးထားပါသည်။ ရွှေ့ ပြောင်းနိုင်သော အိမ်အခွံမှာ တန် ၂၀လေး ပါသည်။ အမြင့်ပေ ၂၃၊ အကျယ် ပေ၂၀ ၊ အရှည် ပေ ၅၂ ရှိပါသည်။ အနွေးဓါတ် နေရောင်ခြည်ဓါတ်နဲ့ အပူဓါတ် များပါ ထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းရှိပါသည်။
ဘက်ထရီအားဖြင့် ဖန်သား အိမ်ကို ကြိုက်သလို ဖုံးအုပ်ကာကွယ်နိုင်သလို လျှပ်စစ်ဓါတ်ချို့ ယွင်းမှု့ အတွက်ပါ ထွက်ပေါက် ရှိနိုင်ရန် ဖန်တီးထားပါသေးသည်။
Art - ပန်းချီဆွဲသော ခွေး
ယိုးဒယားက ဆင်တွေလိုတော့ ကောင်းကောင်းမဆွဲနိုင်ပေမဲ့ စိတ္တဇပန်းချီအဖြစ် တော့ တောင်ခြစ်မြောက်ခြစ် ပန်းချီ ဆွဲတဲ့ ၃နစ်သား Pekingese terrier ခွေးလေးပါ။ နေရာ Fallbrook, California မှာပါ။
ခွေးကလေး နှင့် သူ့ လက်ရာ ပန်းချီကားများ
Ms Monacelli said her pet can take days to produce one painting as he can only work for minutes atatime
Technologo - ထုတ်ချင်းပေါက် မြင်နိုင်သော အုတ်နံရံ
optical glass fibersဖန်သားများဖြင့် တည်ဆောက်ထားသော အုတ်နံရံ...
ရေချိုးခန်း မှာ ဒီအုတ်နဲ့ ဆောက်ရင် တော့ ...... ဒန့်ဒန့်ဒန့် 
အသေးစိတ်ဖတ်လိုသူများ အတွက် စာမှီး http://optics.org/cws/article/research/19184
Art - LED art
Newsm - Can you spot 103 in the paint?
Answer will be in next post.
Technology - Robotic Model
နေရာ = ဂငယ်
ကိုယ်တွင်း စွမ်းအား = 30 motors လမ်းလျောက်နိုင်ရန် လက်လှုပ်ရှားနိုင်ရန်
မျက်နာ ခံစားမှု့ = 8 motors ဒေါသမျက်နာ အပြုံးမျက်နာ ခံစားမှု့ မျက်နှာ ဖေါ်ပြနိုင်ရန်
ကိုယ်အလေးချိန် = 6st and 9pounds = (6 * 14 +9) lbs
ဆိုဒ်အရွယ် = သုံည the size 0
အရပ် = ၅ပေ၂လက်မ
တီထွင်သူ = National Institute of Advanced Industrial Science and Technology.
News - Egg in the bottle
အောက်ကလန် Oakland Farm Eggs ကုမဏီမှ တီထွင် ထုတ်လုပ်လိုက် သော အဆင်သင့် သုံးနိုင်မည့် ကြက်ဥ အနစ် ခေါက်ပြီးသား ကြက်ဥဗူး။ ၁၅ မတ်လ ၂၀၀၉ London's ExCel centre တွင် နိုင်ငံတကာ အစားအသောက် ပြပွဲ တွင် စတင် ရောင်းချမည် ဟု သိရသည် ဈေးနုန်း မသိရပါ
Technology - မျက်လုံးချင်းဆုံရင် ရင်ခုန်တယ်
ရင်ခုန်တယ်ဗျာ .... ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ..... ဓါတ်ပုံ အရိုက်ခံရမှာစိုးလို့ ။
ဖလင်ထုတ်လုပ်သူ Rob Spence သည် မျက်ကပ်မှန် ကင်မရာ ကို အင်ဂျင်နီယာများ ၏ အကူအညီဖြင့် တီထွင် လိုက်ပါသည်။ သူ၏ ညာဘက် မျက်စိ သည် ငယ်စဉ်အခါက မတော်တဆထိခိုက်မှု့ ကြောင့် ပျက်စီးဆုံးရှုံး ရသည်။ သူ စိတ်ကြိုက်တီထွင်ထား သော မျက်လုံးပုံ ကင်မရာ သည် မျက်လုံးကဲ့သို့ ကြည့်နိုင် မြင်နိုင်သလို လိုအပ်သည့် မြင်ကွင်းကို ရိုက်ကူးနိုင်လေသည်။
ဒင်းကို ကူညီသူများထဲတွင် နံမည်ကျော် အင်ဂျင်နီယာ Steve Mann ပါဝင်ပြီး ထိုအင်ဂျင်နီယာမှာ , wearable computers research group at MIT - Massachusetts Institute of Technology in Cambridge, Massachusetts မှ ဖြစ်ပါသည်။ ကင်မရာ အသေးများ အဓိက ထုတ်လုပ်သော Santa Clara, California-based OmniVision Inc, ကုမဏီမှ ထောက်ပံ့ ကူညီပါသည်။
Technology - Mobile handphone battery ၁၀စက္ကန့် ဘဲစောင့်
လာပါပြီ.. မိုဘိုင်းဖုန်း ခေါ် လက်ကိုင်ဖုန်းအတွက် ဘက်ထရီ အားသွင်းစက်ကို စံ တခုတည်း အဖြစ် သတ်မှတ် လိုက်သည်။ သို့ အတွက် Nokia, Sony, Sansung , etc.. ဘယ်လို ဖုံးဖြစ်ဖြစ် ချာဂျာ တခုတည်း ဖြင့် အားသွင်း နိုင်တော့မည်။
သို့ အပြင် အားသွင်းရာတွင် ၁၂ စက္ကန့် အတွင်း အားပြည့်နိုင်သည့် ဘက်ထရီကို တီထွင်လိုက်ပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါသည်။
The new battery could also work with rechargea
Animal - မြန်မာ့ Dracula fish အစွယ်ပါသောငါး
အစွယ်ပါပြီး သွေးစုတ်ဖုတ်ကောင် ပုံစံ မျိုးရှိသော သေးငယ်သော ငါးကို မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်း ဒေသ စမ်းချောင်း အတွင်းတွင် ဧပြီလ ၂၀၀၇ တွင် ဖမ်းဆီးမိကြောင်း (နေရာ အတိအကျ မသိရကြောင်း) ၊ new species အဖြစ် သတ်မှတ်ကြောင်း သိရသည်။
၁.၇ စင်တီမီတာ (၀.၆ လက်မ)အရှည် ရှိပြီး Cypriniform group အုပ်စုဝင်ငါး အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။
အထက်မှ ပုံမှာ သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်တွင် ထားရှိသာ Danionella dracula ငါး ဓါတ်ပုံဖြစ်သည်။
ခွင့်လွှတ်ပါ အသေးစိတ် ကို စိတ်မ၀င်စားပါ ဘယ်လိုငါးဖြစ်ဖြစ် ကြော်လိုက်ရင် ကြွပ်ကြွပ်ဝါးနိုင်သည့်အတွက် အသေးစိတ်မလိုပါ။ အရေးကြီးသည်မှာ ငါးကြော်ဖြစ်ရန်သာ အရေးကြီးပါသည်။
News - Can you fly without wings? Yes I can
Unusual Flying Car!
Crash landing: An emergency worker surveys the scene
Remark ; this is neither 4D nor Toto nor NO-Lottery number
Animal - Strange Stingless Jellyfish အဆိပ်မျှင်မရှိသော ဂျယ်ရီငါး
Jellyfish ကို မြန်မာ လို ဘယ်လိုခေါ်သလဲ မသိပါ။ သို့ သော် Jellyfish ဆိုရင် အဆိပ်မျှင်တွေကြောင့် အဲဒီငါးနားကို မသွားရင်တောင် ငါးရှိမှန်းမသိလို့ အဆိပ်မျှင် ထိုးခံရပြီး မိနစ်ပိုင်းအတွင်း အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်။ ပင်လယ် ကမ်းခြေ ဘက်မှာ အနားယူကြတဲ့သူ တွေဟာ မထင်မှတ်တဲ့ Jellyfish အန္တရယ် ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ ကုသနည်းက တော့ ရှလကာရည်ကို သုတ်လိမ်းလျှင် အဆိပ်ဖြေတယ်လို့ကြားဖူးပါတယ်။
Republic of Palau ဆိုတဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံလေးမှာ ရှိတဲ့ Jellyfish ကတော့ အဆိပ်မျှင် လုံးဝ မရှိပါဘူး။ တချိန်တခါက အဲဒီကျွန်း ထဲက ရေကန်နဲ့ပင်လယ်ဟာ တဆက်တည်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကာလကြာလာတဲ့ အခါ သောင်ထွန်းပြီး Jellyfish တွေဟာ ရေကန်ထဲမှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ Jellyfish တွေကို အဖမ်းအဆီးမရှိတဲ့ အတွက် Jelyfish တွေအနေနဲ့စိတ်အနှောင့်ယှက် ကင်းလာတယ် ယူဆရပါတယ်။ သူတို့ ရဲ့ အဆိပ်မျှင်တွေ ဟာ အသုံးပြုစရာ မလိုတဲ့ အတွက် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သေးသိမ် ပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။ Jellyfish တွေကို မဖမ်းဆီးရဆိုတဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ နိုင်ငံဥပဒေ ထုတ်ထားတဲ့ အတွက်ကြောင့် Jellyfishတွေဟာ ရေကန်ထဲမှာ တိုးပွား လာပါတယ်။
အဆိပ်မျှင် မရှိတဲ့ Jellyfish တွေဟာ ဒီနိုင်ငံ တခုထဲမှာသာ တွေ့ နိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
တခြား အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာလည်း အဆိပ်မျှင် မရှိသလောက် နည်း တဲ့ Jellyfish ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ သို့ သော် အဆိပ်မျှင် ၂ချောင်းလောက်တော့ မြင်ရပါတယ်။ အဆိပ်ရှိမရှိတော့ မသိပါဘူး။
Jellyfishရှိတဲ့ Palau က ရေကန်ဟာ အတော် စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှပါတယ်။
Palau နိုင်ငံကတော့ ပစိဖိတ်ပင်လယ်ထဲက သေးငယ်တဲ့နိုင်ငံလေးဖြစ်ပါတယ်။ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံရဲ့ အရှေ့ဘက် မိုင်၅၀၀ အကွာ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ တောင်ပိုင်း မိုင်၂၀၀၀ အကွာမှာ ရှိပါတယ်။နိုင်ငံအကြောင်း အသေးစိတ်ကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပြီး Jellyfish ရေကန် အကြောင်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဲ့ Jellyfish ကို ပြုတ်ပြီး သုတ်စားရင် အလွန်အရသာ ကောင်းပါတယ်။
Technology - Mobile handphone battery ၁၀စက္ကန့် ဘဲေ...
Animal - Strange Stingless Jellyfish အဆိပ်မျှင်မရိ...